News Feed Archives | Page 21 of 41 | Frontier Myanmar
ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှ သြစတြီးယား ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကို ဆင်ဆာဘုတ်အဖွဲ့ ပိတ်ပင်
Eva Hirschi အဝတ်အစားမပါ ကိုယ်လုံးတီးနှင့် မြင်ကွင်းများကို မြန်မာအစိုးရ ဆင်ဆာဘုတ်အဖွဲ့က ပိတ်ပင်လိုက်ပြီးနောက် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Goethe-Institut ၌ ကျင်းပမည့် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ပန်းချီဆရာ Egon Schiele ၏ ဘဝဇာတ်ကြောင်းအား ရိုက်ကူးထားသည့် သြစတြီးယားရုပ်ရှင်ကားတစ်ကားကို ပြသခြင်းမပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ၁၈၉၀ ပြည့်နှစ်တွင် မွေးဖွားပြီး.
ကမ္ဘာ့ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှု အညွန်းကိန်းတွင် မြန်မာက အောက်ဆုံးနား ရောက်ရှိနေ
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တရားမဝင် ကုန်သွယ်မှုများအား နိုင်ငံအသီးသီးက ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုများကို လေ့လ့ာဖော်ပြထားသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှု အညွှန်းကိန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံက အောက်ဆုံးအဆင့်နီးပါး ရောက်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အဆိုပါအညွှန်းကိန်းတွင် နိုင်ငံပေါင်း ၈၄ နိုင်ငံကို ဖော်ပြထားရာ မြန်မာက အဆင့် ၈၂ တွင်.
တရားမျှတမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေ၊ ဖြေရှင်းချက်တွေ စတာတွေကို ဖျော်ဖြေရေးပုံစံနဲ့ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်အောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ “နေရယ်၊ လရယ်၊ အမှန်တရားရယ်” ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲ ဒုတိယပိုင်းကို ယခုလ ၅ ရက်နေ့ကနေစပြီး MRTV ရုပ်သံလိုင်းမှာ ပြသတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့ ပထမပိုင်းတုန်းကတော့ စိတ်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ နယ်မြို့လေးတစ်မြို့က ဒေသခံတွေ.
လောင်းကစားဥပဒေသစ်၌ ကာစီနိုများ တရားဝင်တည်ထောင် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပါဝင်
လောင်းကစားရုံ (ကာစီနို) များအား တရားဝင် တည်ထောင် ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပေးမည့် လောင်းကစားဥပဒေ မူကြမ်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်၌ သြဂုတ် ၂၁ ရက်နေ့က တင်သွင်းလိုက်သည်။ ၁၉၈၆ ခုနှစ်က ပြဌာန်းခဲ့သည့် လောင်းကစားဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းပြီး အစားထိုးမည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ လောင်းကစားဥပဒေမူကြမ်းတွင် အခန်း ခြောက်ခန်းနှင့် ပုဒ်မ.